तेलगुको गीतसँग मेल खाने ‘रोजी’को गीत – Mero Film
तेलगुको गीतसँग मेल खाने ‘रोजी’को गीत
२०७५ साउन २४ गते ११:१३
कविराज गहतराज पछिल्लो समय नेपालका महङ्गा कोरियोग्राफर हुन् । फिल्म वृत्तमा उनको कोरियोग्राफीको चर्चा निकै हुने गर्छ । उनको व्यस्तता यति छ की उनका लागी समय कुरेर बस्छन निर्माता निर्देशकहरु ।
मानिसको सोचको कुनै सिमा हुँदैन भनिन्छ । आफ्नो सोचलाई कलाको मध्यमबाट उत्कृष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम छन् कविराज । बर्षमा बन्ने फिल्मको करिब ७० प्रतिशत फिल्ममा उनी नै कोरियोग्राफी गर्छन् ।
तर, पछिल्लो समय उनको कोरियोग्राफी रहेको फिल्म रोजीको एक गीत सार्वजनिक भएको छ ‘फूल होइन’ जसमा उनको सोचले ‘फेल’ खायो । उनले आफ्नो सोच प्रयोग गरेनन् अरु कसैको सोचलाई नक्कल गरे । नक्कल भन्दा पनि चोरी नै गरे ।
‘फूल होइन’ गीतको भिडियोको सुरुवात हेर्दा दर्शकलाई बलिउड फिल्म ‘रइस’मा अभिनेता साहरुख खानको गेटअप र हिडाइको याद आउँछ । त्यो त सामान्य हो । तर जब दर्शकले दक्षिण भारतीय फिल्म​ ‘सराईनोडु’को गीत ‘तेलुसा तेलुसा’ हेर्छन तब थाहा पाउँछन् कविराजले गरेको कोरियोग्राफी उक्त गीतको कोरियोग्राफीको नक्कल । भिडियो मात्र होइन गहिरिएर सुन्ने हो भने गीतको मेलोडी पनि मेल खान्छ ।
उक्त गीतमा उनले गरेको कोरियोग्राफी त्यसै गीतबाट चोरिएको हो । कविराजले कतै कतै बठ्याईँ गर्न खोजेका छन् तर उनी चुकेका छन् । भिडियोमा रोजिकी नायिका मिरुनाले लगाएको ड्रेस अप पनि ‘सराईनोडु’की नायिका राकुल प्रीत सिंहको जस्तै छ ।
कविराजले उक्त गीतको कोरियोग्राफीलाई तल/माथि, अगाडी/पछाडी गरेर रोजिमा प्रयोग गरेका छन् । तर नेपाली दर्शकसँग नजिक रहेको दक्षिण भारतीय फिल्मको कपि गर्नु कविराजको मुर्खता थियो । दर्शकले उनको बठ्याईँ बुझेका छन् ।
प्रसंसा कमाइरहेका कविराजले हुबहु कोही अरुको कोरियोग्राफी चोर्नुले उनको व्यस्तता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । चोरी वा कपि गरेर नै कविराजले कोरियोग्राफी गर्छन भने कविराजको काम निर्देशकले नै गर्न सक्छन् ।
फ्रेम वाई फ्रेम हेरेर गर्न सक्ने क्षमता निर्देशकमा पनि हुन्छ । कविराजलाई फिल्ममा कोरियोग्राफरको रुपमा लिनुको मतलब यो हो की उनले साफ्नो सोचको प्रयोगबाट गीतलाई मुर्तरुप दिउन । नत्र उनको उपस्थिती के का लागी ?
कविराजले नै कपि गर्न थाले, कपि गरेर नै आफ्नो व्यस्तता बढाएका हुन् भने उनको करियरलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध नै थाम्न सकिन्न ।
फिल्म रोजीलाई प्रतिक्षित मानिएको छ । युवा स्टार प्रदीप खड्का अभिनित यस फिल्मलाई निरक पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । गीतको कोरियोग्राफी मिल्नुमा निर्देशकको पनि कमजोरी देखिन्छ । भदौ २२ मा फिल्म प्रदर्शनमा आउन लागेको छ । यसै दिन सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म राम कहानी पनि रिलिज हुँदैछ । राम कहानीसँग टक्कर लिन आएको फिल्मको पहिलो गीत नै चोरीमा पर्नु फिल्मका लागि राम्रो होइन ? फूल होइन र तेलुशामा कति भिन्नता छ यो छुट्याउने जिम्मा दर्शकलाई पनि ?
फिल्म रोजीको गीत ‘फूल होइन’
फिल्म ‘सराईनोडु’को गीत ‘तेलुसा तेलुसा’
2 thoughts on “तेलगुको गीतसँग मेल खाने ‘रोजी’को गीत”
Nawaraj gahatraj says:
Patrakar Mitra …..yo geetko location ra dress up kunai kunai shot ma milekai ho sathai hajurko bhanaima hubahu choreko nai hola…but maile ni2ta nai geet purai hereko xu…but sabai seen ra shot hubahu mileko xaina…ta choreko kuralai choreko vannu sahi nai ho..tyaha aru dherai shot haru xan Jun dheri ramro Pani chhan tyo ramro kuralai ni Ali milayara lekhda ta hunthyo holani….man Manai aafaima ma ek patak sochnush ta eutai sano hamro Nepali film industry le tyatro location ma gayara tyatro dukha garera aako kuralai kina birseko sachhai tyo geetko video ramro xaina ta ????…aafaima ek patak sochnush ki…kami kamjori aulauune nai ho vane ko Pani chhaina yaha ra dudhle dhoyako….ho sahi ho galat lai galat vannu parxa…but ramro kurako ni prasamsha garne bani basalne ho ki????????
patrakar mitralai dhanyabad,,,kamse kam geetko samikchya garna vayani yo video heridinu vo,,,ho pakkai nai k hi short haru thyakkai copy arthat hajurko vasama vannu parda chori nai vayako spasta dekhiyako xa,,but hamro yati sano nepali film indusrty le ni tyati mathi international levelko video banauna sakexa vanne kurama hajurlai garva xaina hai,,,ani maile2ta nai geet majjale hereko xu,,,sarsarti herda hajurle vanjhai purai video copy nai xaina ni,,,tyha vayaka kati scene ani short haru sarai ramro garva garna layak xan,,,k hajurlai tyasto lagena ra ?////,,,dudhma nai dhoyaka sabai kaha xan ra,,,kami kamjori sabaima hunxa tyaslai chirera agdi badhne ho,,,hajurle vane jhai sabai copy kaha xa ra tyaha ,,,naramro coment ta thikai ho kamse kam ramro kuralai ni ali milayara lekhda aruko ni ijjat garne bani basthyo ki ?????? naramro nai vannu nai parne ho vane sansar ma euta cheej ya kunai manxe vannush ma tyasko barema pani khot nikalidiula,,,,,yo mero bacha vo hajurlai…